Predator Triton 300: solosaina finday maivana vaovao an'ny Acer | Vaovao momba ny gadget
Acer dia mamela antsika vaovao bebe kokoa amin'ny famelabelarany ao amin'ny IFA 2019. Nanolotra ny solosaina findainy vaovao ny orinasa, ao anatin'ny fianakavian'ireo fitaovana Predator. Amin'ity tranga ity dia ny Predator Triton 300, izay aseho ho solosaina finday mahery nefa maivana tokoa. Fampifangaroana izay mahatonga azy io ho tonga lafatra raha ny amin'ny fitaterana azy amintsika na aiza na aiza.
Izy io dia aseho ho maodely solvent, izay hanome antsika fampisehoana lehibe. Aza adino ihany koa fa Acer dia iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ity sehatry ny tsena ity. Safidy tsara io Predator Triton 300 io mba handray anjara amin'ity sehatra ity. Efa fantatsika daholo izany.
2 Predator Triton 500 dia misy izao
Ity Predator Triton 300 ity no maodely vaovao indrindra ao amin'ny faritra Triton, izay manana Windows 10 ho toy ny rafitra miasa. Izy io dia maodely iray mahay ny fomba fampifangaroana tanteraka ny fampisehoana sy ny fiasa miaraka a endrika kely manintona, mahaliana ary tena manintona. Milanja 2.3 kg fotsiny izy, izay maivana kokoa raha oharina amin'ireo modely hafa eny an-tsena ankehitriny. Toy ny fanao amin'ity sokajy ity dia tonga amin'ny faran'ny mainty mavo miaraka amina lantom-peony manga sy jiro izy.
Ny efijery an'ity laptop Acer gaming vaovao ity dia manana habe 15,6 santimetatra. Izy io dia efijery iray misy vahaolana feno HD, vita amin'ny tontonana IPS. Manome antsika ny tahan'ny famelomana 144 Hz sy ny fotoana famaliana 3 ms, mba hahazoantsika traikefa tsara indrindra rehefa milalao miaraka aminy.
Ity modely ity dia mampiasa a Fandefasana Intel Core i7 andiany faha-9 ao anatiny, izay ampiarahina amin'ny NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU sy 16GB an'ny 4Hz DDR2666 fahatsiarovana (azo ovaina ka hatramin'ny 32GB). Mba hananan'ny mpampiasa ny toerana fitehirizana faran'izay betsaka misy ao aminy, nanamafy i Acer fa ity Predator Triton 300 ity dia manolotra fanampiana hatramin'ny roa TB 1 PCIe NVMe SSD ao amin'ny RAID 0 ary hatramin'ny kapila mafy 2 TB. Ary koa, voamarina fa ny Killer Wi-Fi 6 AX 1650 dia natambatra niaraka tamin'i Killer Ethernet tao.
Ho an'ny feo dia nampiasa Waves Nx ilay orinasa. Etsy ankilany, Ny kitendry laptop dia misy jiro RGB amin'ny faritra sy lakile Turbo sy Predator Sense natokana, singa roa tena ilaina amin'ny kahie filalaovana ankehitriny. Ny marika dia te hitazona amin'ny endrika famolavolana hafanana ambony kokoa izay hita amin'ny solosaina finday rehetra ao anatin'ny faritra Predator. Ity koa dia misy mpankafy roa miaraka amin'ny teknolojia mpankafy vy an'ny AeroBlade 3D an'ny akera 4, ny teknolojia CoolBoost, ary ny fidiran'ny rivotra sy ny vavahady famohana.
Predator Triton 500 dia misy izao
Tsy io Predator Triton 300 io ihany no zava-baovao amin'ity sokajy ity. Acer koa dia nanolotra tamin'ity hetsika ity tao amin'ny IFA 2019 ny Predator Triton 500, maodely iray hafa ao amin'ity solosaina finday filalaovana ity ihany. Izy io dia aseho ho maodely matanjaka iray hafa, miaraka amin'ny fampisehoana tsara, saingy maivana sy mahia izany. Raha izany dia matevina 17,9mm fotsiny ary ny lanjany dia 2.1 kg. Mahatonga ny fitateranao hahafinaritra indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ity maodely Acer ity dia manana efijery nohavaozina. Mampiasa ny efijery Full HD 15,6-inch, izay mirehareha amin'ny tahan'ny famelomana 300Hz mahery. Namboarina niaraka tamin'ny chassis metaly rehetra miaraka amina bezel tery 6,3mm fotsiny mba hanomezana tahan'ny chassis-efijery 81% mahavariana. Ho an'ny processeur dia mampiasa andiany faha-7 an'ny Intel Core i9 izy, amin'izay dia hanome hery lehibe antsika amin'ny fotoana rehetra, ahafahana manao solosaina finday mahery vaika.
Acer dia nanamafy fa ireto solosaina finday vaovao roa ireto dia hamidy amin'ity fararano ity amin'ny fomba ofisialy manerantany. Ho an'ireo liana amin'ny fividianana ny Predator Triton 300, dia nambara fa hisy izany manomboka amin'ny volana oktobra amin'ny vidiny 1.299 euro. Etsy ankilany, ireo izay te-hividy ny Acer Predator Triton 500 dia tsy maintsy miandry ny volana novambra, izay ho tonga amin'ny vidiny 2.699 euro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Predator Triton 300: solosaina finday vaovao an'ny Acer